I-Tantric Biography - Iphrofayili ye-Rock Band Tantric
I-Tantric ithathe umoya ophefumlelweyo ovela kwi- Alice kwiiNtanga kunye neCredit ngenxa yegama labo luluhlu olulukhuni lwe-sludgy. Ukunyuka kumlotha weqela eliphumeleleyo, iintsuku zeNew, amalungu eTantric aqale athola abaphulaphuli abakhulu bezoqoqosho ekuqaleni kwee-2000, kodwa njengoko iminyaka elishumi igugu, ukungqinelana kwangaphakathi kunye ne-albhamu ephakathi kwenzelwa ukuphucula ukuqhubeka kwazo. Ngamahloni, uTantric wabuya ngo-2009 nge-albhamu entsha, i-Mind Control.
Amalungu amathathu eTantric - guitarist u-Todd Whitener, umculi kaMat Taul kunye no-Jesse Vest - abayingxenye yeqela le-'90s 'yeeNtsuku zeNew, ezihamba ngeenyawo zeengqungquthela ze-grunge ezifana ne-Soundgarden kunye no-Alice kwiiNyunithi ukuze zithandwa ngabantu. Kodwa ukungavumelani ne-frontman kunye nombhali oyintloko wencwadi iTravis Meeks kukhokelela kulo lonke iqela ukuba lixothwe okanye liyeke. Abaculi abathathu banquma ukwenza iqela elitsha, baqasha uHugo Ferreira njengomculi wabo omtsha. Ibhenkethi isayinwe neleyile kaMadonna yaseMaverick kwaye ilungiselele iqela layo.
I-Post-Grunge Debut ephumelelayo:
I-Tantric ye-self-titled debut ye-Tantric yawa ngoFebruwari 2001. Ngamandla eTantric , kwacaca ukuba uFerreira wayeyingxenye ebuthatywayo ngenxa yokukwazi kwakhe ukulinganisa u-Layne Staley, umongameli olahlekileyo u-Alice kwiiCandelo. Le yayingenayo iqela elinomdla ekuphuleni umhlaba omtsha-kunoko, kwiingoma ezinjenge-single "Ukungqubuzana," uTantric wayefuna ukukhwela isitimela se -grunge emva kokuhlelwa kumaqela afana neCredit kwaye, kamva, i- Nickelback .
I-Tantric yahamba ngegolide nangona, ngokukhawuleza, ukuphononongwa kwakunzima xa bekungaboni nje.
Kwiminyaka emithathu kamva, uTantric wabuya emva kokuba Sifika , enye inkunzi ye-rock-and-potatoes rock hard. Usasaza u-Alice kwi-Chains 'sstical / viemonic vibe kwiingqungquthela ezinjenge "Hayi ngoku," uTantric akaphumelelanga ukufumana intengiso enkulu emva kokuba sihambe , sikhulisa iingxaki malunga nekamva leqela.
Utshintsho lweendlela kunye neeNteko zeTekisi:
Ngaphambi kokukhululwa kwe-albhamu elandelayo yebhanki, iTantric yabona uluhlu lweenguqulelo. Amalungu eqela, ngaphandle kweFerreira, ayishiya ibhendi - ngokungathandabuzekiyo, umphathi oqeshwe yi-Whitener, Taul kunye neVest wayeyilungu elilodwa lishiya kwi-original Tantric lineup. UFerreira wathatha abaculi abatsha kwaye walahla iiseti zeengoma ebesele ebhalile kunye nabalingani bakhe bokuqala. Ngexesha elifanayo, iTantric yahlula iindlela kunye noMaverick, ekhokelela indlela yokuba isayinwe kwiSilent Majority ukukhupha i-2008 I-End End-Begins , eyahluleka ukuguqula inzuzo yezolimo.
I-Tantric yabuya ne-albhamu entsha, u- Mind Control , ngomhla we-Agasti 4, 2009, owaveliswa yiBassist yangaphambili yokutyelela iCredit kunye noBrett Hestla owayengumphathi weNew New Day. Emva kokuba utshintsho lwabasebenzi abongezelelweyo kunye ne-band-current band ekwahlukana kuwo wonke ama-US ngoko amalungu athengisa iifayile zomculo nge-imeyile yokwakha iingoma zabo. Ibhanti kamva yadibana kunye neengoma ezingama-30 kwi-studio ekugqibeleni ikhetha ukurekhoda iingoma ezi-12 enye ye-albhamu yazo eyona nto.
'37 Iziteshi ':
Umculi wengoma uHugo Ferreira wahlala yedwa yedwa ilungu lebhodi ngexesha lokurekhoda kwe-albhamu yesihlanu ye-Tantic yama-37 ama-Ferreira ayenziwa ngokwayo.
I-albhamu eneentetho zeendwendwe ngu- Shooter Jennings kunye nomculi we-Hinder u-Austin Winkler. I-albhamu ye-albhamu ibonise abaculi abaninzi beendwendwe kunye nokukhuthaza i-albhamu i-Ferreira ibuthele iqela elitsha lokutyelela eliye ladlala ngoku kwi-albhamu.
'IiNqoloba zeBlue blue':
I-albhamu yesithandathu ye-studio ye-Ferreira kwakhona I- Archives Archives ye- Blue Room eyenziwa yi-2014 eyilungu le-albhamu ehlanganiswa neenkcukacha zangaphambili ezingakhange zikhutshwe kwi-career yazo. Isihloko se-albhamu livela kwigama le-studio yasekhaya, "i-Blue Room." I-albhamu iquka iinguqulelo ze-acoustic ezisandul 'ukutshalwa kwexesha lokuqala "Ukuchithwa" kunye nokuthi "Ukulila" kunye nokuhlaziywa okutsha kwexesha elizayo lokuthi "Ukulawula Ingqondo" kunye nokuwa "phantsi."
Uluhlu lweTantric lwamanje:
UHugo Ferreira - amazwi
UScott Wilson - ugugu
Tommy Gibbons - igitare
Iingoma ezibalulekileyo zeTantric:
Emva kokuba Sihambe (2004)
Ukuphela Kuqala (2008)
Ukulawula Ingqondo (2009)
37 Iitshini (2013)
IiNqoloba zeBlue Room (2014)
UHugo Ferreira, ngendlela eyaba yinxalenye yomgca we-Tantric.
"Sasilawulwa yinkampani efanayo ngexesha elinye xa ndisebandleni elibizwa ngokuba yi-Merge kwaye babekho kwiintsuku zeNew. Sazi kunye kwaye sasisondelelana kunye ncinane. Ndandilungele utshintsho, kwaye baxoshwa kwiintsuku zeGig entsha kwaye befuna i-gig entsha, nayo. Ndaza ndaza ndahlabelela kunye nabo, kwaye kwakungokwemvelo yendalo. Wonke umntu wahamba kakuhle, ngoko sasifana nathi, 'Hayi, simele sibize le nto.' Siyibiza ngokuthi yi-C-14, eyayiyilona igama lokuqala. Emva koko sagqiba ekubeni size negama elingcono. "
UHugo Ferreira, ngendlela awaphatha ngayo iingxaki zeelayibhile kunye noshintsho lwabasebenzi emva kokuba ' Emva kokuya' .
"Emva kokutshatyalaliswa kwangaphambili kwaphela, ndandihamba ndaza ndakhulula yonke loo hlobo yamandla kumculo. Ndangena endlwini yangaphantsi yendlu yam apho ndine studio eyakhelwe khona, kwaye ndandisanda kuqala ukubhala. Into ehlekisayo malunga nokulwa nemiba kukuba le nkqubela yenza ukuba unomdla. "
UHugo Ferreira, echaza isizathu sokuba agqibe ukugcina igama leTantric emva kokuphela kweqela lokuyeka.
"Kwakunamathele ngokuqinisekileyo kwimiba yam, kunye nam nje ndingazange ndiqalise ngaphaya kokuqala. Ndiyifumene into ebhaliweyo engalo yam. Indlela endandiyijonga ngayo kukuba ndiyinxalenye yento ebeka le bhanti apho ikunje ngoku, ngoko ke ndinegunya lokusebenzisa igama.
Andizange ndishiye kwibhande, wonke umntu wenza. Ndinguye okholwayo kuyo. "
I-Tantric igubungele iFleetwood Mac "I-Chain" emva kokuba Siya .
UHugo Ferreira wakhulela kunye noNuno Bettencourt, owayekade esekuqaleni kweqela le-'90s Extreme.
(Ehleliwe nguBob Schallau)
Indlela Yokuxelela Ukwahlukana Phakathi Kwe-Grasshopper kunye neCricket
Iintliziyo - Ubungqina Bemivubukulo Yokulawula Umlilo
I-Wheel Anatomy 201: ii-Beads namaFlanges
U-Einstein Uphakamisa Iingcamango Zakhe zobudlelwane